China 10220 Unibit Hole Enlarging 8 Step Drill Bit mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Ny lozam-pifamoivoizana tsy mitongilana mampitombo ny dingana fandavahana ny isa 20. Dingana valo ho an'ny haben'ny lavaka 9/16 ″ hatramin'ny 1 ″ sy 1/8 halalin'ny dingana. Ny lavaka fanamoriana no ilaina. Haja haingam-pandeha, misy fefy fanapahana tokana.
KARAZANA MASINA &
Miaraka amin'ny karazany, kalitao tsara, vidiny mirary ary endrika am-bolo, ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ity sehatra ity sy indostria hafa. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha avy amin'ny sokajin-javatra rehetra izahay hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy hahatratrarana ny fahombiazan'ny tsirairay! Miarahaba ny mpanjifa, fikambanana ara-barotra ary namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay mba hifandray aminay sy hikatsaka fiaraha-miasa ho tombontsoan'ny tsirairay.
Ny vokatray dia aondrana manerantany. Ny mpanjifanay dia afa-po foana amin'ny kalitao azo antoka, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny vidin'ny fifaninanana. Ny tanjonay dia ny "manohy mahazo ny fahatokisanao amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena amin'ny fiezahana hanatsara hatrany ny vokatra sy serivisinay mba hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpampiasa farany, ny mpanjifa, ny mpiasa, ny mpamatsy ary ny vondrom-piarahamonina manerantany izay iarahanay miasa".
Teo aloha: Hss Boribory mahitsy fihodinana drills feno tanteraka
Manaraka: MTS manodina sisiny